Bulgaristan'dan Volkswagen Fabrikası İçin Teşvik Hamlesi | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
ပင်မစာမျက်နှာလောကဥရောပ35 ဘူလ်ဂေးရီးယားဘူလ်ဂေးရီးယား၏ Volkswagen စက်ရုံအတွက်မက်လုံး
17 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 35 ဘူလ်ဂေးရီးယား, 49 ဂျာမဏီ, ဥရောပ, လောက, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, ဘီးစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း 0
ဘူလ်ဂေးရီးယားမှာတည်ရှိပါတယ် Volkswagen ရဲ့အသစ်ကစက်ရုံများအတွက်တူရကီရဲ့အကြီးမားဆုံးပြိုင်ဘက်၎င်း၏ကမ်းလှမ်းမှုကိုအစိုးရမက်လုံးပေးနှစ်ဆတိုးလျက်ရှိသည်။ VW တို့ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုဆီးရီးယားမငြိမ်သက်မှုတူရကီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ဆက်စပ်သောဖော်ပြထားသည်။
ဂျာမန်မော်တော်ကားကုမ္ပဏီကြီး Volkswagen က (VW တို့) တူရကီရဲ့အဆိုးဝါးဆုံးပြိုင်ဘက်၌တည်လိမ့်အသစ်တစ်ခုစက်ရုံများအတွက်ရှာပုံတော်အတွက်ဘူလ်ဂေးရီးယားစက်ရုံအားပေးပြီးမှခံရဖို့အစိုးရထောက်ပံ့ငွေပမာဏကိုနှစ်ဆတိုးလျက်ရှိသည်။
ဘူလ်ဂေးရီးယားသမ္မတဟောင်း Rosen Plevneliyev ကစက်ရုံသစ်အတွက်အစိုးရ၏မက်လုံးများကိုနှစ်ဆတိုးရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ကြောင်းဂျာမန်သတင်းစာ Frankfurter Allgemeine Zeitung သို့ပြောကြားခဲ့သည် DW Turkish ကပြောကြားခဲ့သည်။
ဆိုဖီယာအခြေစိုက်ဘူဂေးရီးယားမော်တော်ကားထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းဥက္ကpresident္ဌ Plevneliyev က "Volkswagen က 135-250 ယူရိုသန်းကို 260 သန်းထက်ယူရိုသန်းပေါင်းများစွာကမ်းလှမ်းဖို့နည်းလမ်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ရှာတွေ့ခဲ့တယ်"
Plevneliyev ကရထားလမ်းနှင့်ကားလမ်းဆက်သွယ်မှုနှင့်လမ်းရထားများထပ်ပေါင်းထည့်သောအခါကမ်းလှမ်းမှုပမာဏသည်ယူရိုသန်း 800 သို့တိုးလာကြောင်း၊ အစိုးရ၏မက်လုံးများကိုပမာဏကိုအီးယူကော်မရှင်နှင့်ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
Plevneliev ကအဆိုပြုလွှာကို VW သို့ပေးပို့ခဲ့ပြီး၎င်းတို့သည်တုန့်ပြန်မှုမရသေးကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
Saks ဆီးရီးယားနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှရုပ်ပုံများသည်အလွန်ဆိုးဝါးသည်ဟု Saxony ၀ န်ကြီးချုပ် Stephan Weil ကပြောကြားခဲ့သည်။ ငါ Volkswagen ကတူရကီအတွက်ဘီလျံခန့်သည်ဤအခြေအနေများအောက်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုပါလိမ့်မယ်စိတ်ကူးမရဘူး "ဟုသူကပြောသည်။ ပြည်နယ်သည် VW ၏ဒုတိယအကြီးဆုံးရှယ်ယာရှင်ဖြစ်သည်။
Volkswagen ကတူရကီနှင့် ပတ်သက်. လက်ရှိဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုစိုးရိမျတရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်ဆုံးဖြတ်ချက်ရွှေ့ဆိုင်းကြောင်းစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်အစီရင်ခံတင်ပြခဲ့ကြောင်းမနေ့ကကြေညာချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအောက်တိုဘာလအစောပိုင်းတွင်ကြေညာမည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်
ဒီစက်ရုံအားဖြင့် Passat နှင့်ထိပ်တန်းမွတ်သိပ်ထဲမှာအသေးစိတ်ဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်း D ကိုအစိတ်အပိုင်းအတွက်တူရကီအတွက်ဂျာမန်သတင်းစာထူထောင်၏ပထမအဆင့်တွင်အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်ကားများထုတ်လုပ်ရန်လိမ့်မယ်နှင့်ပိုပြီးအရောင်းအခွင့်အလမ်းများပေးပါလိမ့်မယ်။
ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစင်တာများဝယ်လိုအား Bursa ၏စက်မှုမြို့ပစ်မှတ်ထားလှုံ့ဆော် 27 / 06 / 2012 Bursa စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များနှင့်စီးပွားရေးသမားများအသင်း (BUSIAD) ဘုတ်အဖွဲ့ဥက္ကChairman္ဌ Oya Yöney၊ BUSIAD ၏“ ကဏ္ectorအလိုက်မျှော်လင့်ချက်များအစီရင်ခံစာaçık” ကိုကြေငြာခဲ့သည်။ ယိုနီကထိုအစီရင်ခံစာသည်သိပ္ပံ၊ စက်မှုနှင့်နည်းပညာ ၀ န်ကြီးဖြစ်သောနီဟတ်အာဂွန်ထံသို့လည်းတင်ပြခဲ့သည်။
တူရကီန်ကြီးချုပ်သစ်ရွေးချယ်နယူးစက်ရုံမှ Volkswagen က 13 / 07 / 2019 အသစ်ကစက်ရုံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ဂျာမန်ကားထုတ်လုပ်သူ Volkswagen AG ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တူရကီကတည်းကအသုံးပြုခဲ့သည်။ Volkswagen AG, ကမ္ဘာ့မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်း၏ ဦး ဆောင်ဂျာမန်ကားကုမ္ပဏီကြီးသည်စက်ရုံသစ်ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ရန် ...
တပ်ဆင်ရန်အဘယ်မှာရှိ Manisa အတွက် Volkswagen ကစက်ရုံ? 17 / 09 / 2019 ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီး Ruhsar Pekcan ကဂျာမန်ကားထုတ်လုပ်သူ Volkswagen သည် Manisa တွင်စက်ရုံတစ်ရုံဖွင့်လှစ်လိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ Pekcan သူတူရကီအပေါ်အပြုသဘောအမြင်ဂျာမန်ထုတ်လုပ်သူများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ကပြောသည်။ CNN က Turk Hakan Çelik program ကို Pekcan, Volkswagen ကတူရကီပါဝင်ခဲ့ ...
Volkswagen က Manisa စက်ရုံတရားဝင်ဖွင့်လှစ် 03 / 10 / 2019 TAYSAD ဥက္ကဋ္ဌ Alper Hook, Volkswagen ကပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါလိမ့်မည်တူရကီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့်အခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုကဒိုမီနို effect ကိုဖန်တီးနိုင်ကဆိုသည်။ Volkswagen သည်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးမော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်သူများထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးစက်ရုံသစ်ကိုလအတန်ကြာဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
Alanya အတွက်နှင်းလျှောစီးခရီးသွားလုပ်ငန်းကနေရွေ့လျား 01 / 04 / 2016 Alanya မှနှင်းလျှောစီးခရီးသွားခြင်း Alanya: ကုန်သွယ်ရေးနှင့်စက်မှုကုန်သည်ကြီးများအသင်း (ALTSO) သည် 2008 တွင်စတင်လှုပ်ရှားခဲ့သောဆောင်းရာသီအားကစားခရီးသွားလုပ်ငန်းစင်တာ၏လုပ်ငန်းကိုအရှိန်မြှင့်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအတွက်
တူရကီန်ကြီးချုပ်သစ်ရွေးချယ်နယူးစက်ရုံမှ Volkswagen က
Volkswagen က Manisa စက်ရုံတရားဝင်ဖွင့်လှစ်